Budada Raw Coluracetam (135463-81-9) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada Raw Coluracetam waa xubin cusub oo gaar ah oo ka tirsan fasalka cunsuriyada ee nootropics synthetic. Asal ahaan waxaa loo horumariyey a ..
Qalabka Root Coluracetam (135463-81-9) video
Root Coluracetam budada (MKC-231) waa daroogada jilicsan ee loo yaqaan 'synthetic drug prodetam' oo loo yaqaan 'nootropic compound'. Ma hayo jiritaan balaaran oo cadeyn ah, laakiin farsamooyinka ficilka (iyo sidoo kale qaabdhismeed) waxay u muuqdaan inay aad u kala duwan yihiin xeryahooda kale sida Piracetam ama Aniracetam.
Root Coluracetam waxay u muuqataa in ay dhexdhexaadinayso geeddi-socod loo yaqaano baraarujin sare (HACU oo gaaban), taas oo ah tallaabada xaddidan ee xoqitaanka qulqulinimada neuron ee loo yaqaan 'synthesis' oo loo yaqaan 'neurotransmitter acetylcholine'. Kordhinta heerka HACU waxay u muuqataa in ay kordhinayso waxqabadka ee dareemeyaasha cholinergic, sidaas darteed waa bartilmaameed la doonayo oo loogu talagalay xoojinta garashada.
Root Coluracetam budada (135463-81-9) Smamnuucista
Product Name Root Coluracetam budada
Magaca Kiimikada N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Molecular Wsideed 389.4
Buuxa Mass 341.174 g / mol
Color Caddaan Caddaan-cad Cyrstalline Solid
Ckaacetam Application Root Coluracetam budada (MKC-231) waa daroogada jilicsan ee loo yaqaan 'synthetic drug prodetam' oo loo yaqaan 'nootropic compound'.
Root Raw budada Coluracetam (135463-81-9) Tafaasiisha
Coluracetam (MKC-231) waa daawo cunsuriyad synthetic ah oo loo maleynayo inay tahay xarun nootropic ah. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan inay kor u qaadi karto garashada iyo xusuusta, dadka isticmaalana waxay sheegeen inay sidoo kale hagaajinayso u fiirsashada, diiradda, iyo aragtida.
Kuuriyada Coluracetam waxay u dhaqmaysaa sida ugu wanaagsan ee korriinka kor u kicinta ee si xushmad leh u saameeya hawlgalkooda xusuusta. Waxaa si gaar ah u kobciya kor u kaca soodhaweynaha, kor u kaca heerarka neurotransmitter acetylcholine iyada oo la siinayo qandaraas ka badan oo la sameeyo. Maadaama acetylcholin waa neurotransmitter-ka ugu dhow ee la xidhiidha xasuusta iyo garashada, waxaa la rumaysan yahay in shaqadani tahay ilaha ugu muhiimsan ee awoodaha maqaarka ee coluracetam.
Coluracetam ayaa si gaar ah awood leh waxayna ubaahantahay qiyaas ka yar inta u dhaxeysa fasalada kale ee cunsuriga ah ee aanotropiga ahayn. Waa mid deg deg ah, gaaraya heerar sarreeya ee plasma gudaha 30 daqiiqado cunno, laakiin seddex saacadood gudahood ayaa hoos u dhacaya.
Root Coluracetam budada (135463-81-9) Mashruuca Waxqabadka
Coluracetam wuxuu xoojiyaa qaadashada isku-xirnaanta sare (HACU), taas oo ah heerka xaddidaadda xaddiga acetylcholine (ACh). Daraasaduhu waxay muujiyeen budada loo yaqaan 'coluracetam budada' si loo wanaajiyo cillad la'aanta barashada hal mar oo afka laga qaato oo la siiyay jiir kuwaas oo ku dhacay cholinergic neurotoxins. Daraasadaha soo socdaa waxay muujiyeen inay sababi karto saameyn muddo dheer soconaya oo ku saabsan jiirka cholinergic neurotoxin ee la daweeyo iyadoo la beddelayo nidaamka qawaaniinta rarka.
Faa'iidooyinka ee budada Coluracetam (135463-81-9)
Coluracetam waxay hagaajin kartaa xasuusta iyo awoodda barashada
Coluracetam waxay kaa caawin kartaa daaweynta niyad-jabka dawada u adkeysata
Coluracetam waxay yareyn kartaa welwelka iyo walaaca
Coluracetam waxay taageeri kartaa neurogenesis (koritaanka unugyada dareemeyaasha)
Coluracetam waxay kaa caawin kartaa daaweynta shisoofrani
Coluracetam waxay hagaajin kartaa indhahaaga
Kalluumeysiga budada Coluracetam lagu taliyey (135463-81-9) Qiyaasta
Cilmi-baarista ugu badan ee coluracetam waxaa lagu sameeyaa xayawaanka halkii aadanuhu, sidaa daraadeed ma jiraan tilmaamo daweyn oo guud ahaan loo aqbalo. Qiyaasta qiyaasta firfircoon ee guud ayaa guud ahaan lagu qeexaa sida xmUMX-5 mg. Isticmaalayaasha coluracetam ayaa soo sheegay in qiyaaso kala duwan oo qiyaas ah loo maamulo labadaba afka iyo lakulanka.
Jawaab celinta isticmaalaha ayaa sidoo kale sheegtay in dulqaadashada budada coluracetam ay si dhakhso leh u horumarin karto. Sida dawooyinka oo dhan, gaar ahaan nootropics, waxaa fiican inaad ku bilowdo qadar yar iyo inaad si tartiib tartiib ah kor ugu qaadatid qiyaasta sida jidhkaagu u falcelinayo una qaabeeyo daawada. Coluracetam waa mid aan sun ahayn waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid dulqaad badan oo badbaado leh.
Dhibaatooyinka ay keento of Coluracetam budada (135463-81-9)
Budada Coluracetam waa sun aan sun ahayn. Sidaa daraadeed waxaa loo tixgeliyaa si fiican oo loo dulqaadan karo.
Dhibaatooyinka kale waa kuwo dhif ah laakiin waxaa ku jiri kara walaac, daal, madax xanuun, dareen-celin iyo lallabo. Mar labaad, saameynaha soo noqnoqda badanaa waxay keenaan qiyaaso badan oo aan caadi ahayn ee nootropic.
Dad badan oo isticmaala mudnaanta koowaad ee daalka Coluracetam ayaa ah inta badan natiijada ka dhalata qiyaasta aad u sareysa.
Dib-u-eegida Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Awoodaha Nootropic Coluracetam ee Cusub ee Maskaxda